Sheekada filimka Mr. Majnu: Akhil wuxuu la yimid sheeko jaceyl iyo shactiro la daawan karo – Filimside.net
Sheekada filimka Mr. Majnu: Akhil wuxuu la yimid sheeko jaceyl iyo shactiro la daawan karo
January 27, 2019 Zakarie Abdi
Taariikhda: January 27, 2019
Ruug cadaa Nagarjuna wiilkiisa Akhil Akkineni wuxuu ku bilaawday waayihiisa fanka Telugu ama Tollywood si aan wanaagsaneyn madaama labada filim uu sameeyay ilaa haatan Akhil (2015) iyo Hello (2017) ganacsi ahaan ka guul dareesteen, balse wiilkan wuxuu ku socdaa qaab jiliinkiisa wanaagsan waxaana haatan tiyaatarada u saaran filimka Mar. Majnu oo rajo wanaagsan laga qabo inuu guushiisa ugu horeyso ku gaaro.
Jilaayaasha filimkan: Akhil Akkineni, Nidhhi Agerwal, Naga Babu, Rao Ramesh
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 25-daqiiqo
Fariinta Filimka Mr. Majnu Oo Kooban: Vikram Krishna aka Vicky (Akhil) waa wiil dhalinyaro ah oo aan xiriirka nolosha ahmiyad badan siinin masuuliyadna iska saarin in dumarka aan qalbiga laga dhaawicin wuxuuna ka helaa haddba gabbar cusub inuu barto.
Balse Vicky (Akhil) noloshiisa waxay is badaleysaa marka ay jeclaato Nikki (Nidhhi Agerwal) taasi oo qoyskiisa tixgaliso asigana mustaqbal ka rabo wuxuuna ugu dambeyntii Vicky (Akhil) aqbalaa inuu xiriir dhab ah gabadhan qalbiga wanaagsan la yeesho.
Vicky (Akhil) iyo Nikki (Nidhhi Agerwal) is fahan dheeraad ah ayaa dhex maraayo waxayna ku balamayaan inay is guursadaan balse si lama filaan ah ayay lamaanahan farxadooda ku lumeysaa waxaana wax walbo sabab u noqonaayo hal qalad oo uu Vicky (Akhil) jaceylkiisa ka galo.
Haddaba qaybaha dambe filimka Mr. Majnu waxaa loo daawan doonaa sida uu Vicky (Akhil) jaceylkiisa kusoo ceshan doono iyo dhibaatooyinka uu la kulmi doono.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimkan: Fariinta filimkan waa mid la fahmi karo laakiin lagu dabaqay dhalinta maanta habka ay u dhaqmaan waxayna sheeko ahaan ka bilaabaneysaa London ayadoo gudaha Hindiya la isla soo aadayo qaybaha dambe waana fariin jaceyl iyo shactiro oo la daawan karo taasi oo isku xirkeeda wanaagsan yahay.
Bandhiga Jilaayaasha: Akhil markaan wuu qaan gaaray dhanka shaashada sida loo matalo waxaana la dhihi karaa Mr. Majnu wuxuu kusoo bandhigay qaab jiliinkiisa ugu wanaagsan daganaan, shactiro iyo kalsoonida uu isku qabo waa hubaal wiilkan inuu mustaqbal wanaagsan ku lahaan doono fanka Tollywood.
Atirishada Nidhhi Agerwal waa xidigta filimkan waxay qaadatay doorka ugu saameynta badan sidoo kalena kaalinteeda si wacan ayay kaga soo baxday waxaana in badan la fahmi karaa inay tahay atirisho fariin walbo sameyn karto kana baxsatay doorkeeda filimka Mr. Majnu.
Dhamaan jilaayaasha kale ee doorka muhiimka ah caawiyaha ah filimkan ku leh sida Rao Ramesh, Naga Babu, Priyadarsi iyo Hyper Aadi iyagana kaalin wacan ayay mashruucaan ka qaateen waxayna isku dheeli tireen fariinta filimkan dhan walbo marka ay shaashada kasoo muuqdaan.
Muxuu Ku Wanaagsan Filimka Mr. Majnu:
Bandhiga is fahanka wacan xambaarsan ee Akhil iyo Nidhhi Agerwal shaashada la imaadeen.
Action xarako ku dheehan iyo muusig wacan
Qaabka loo faaf reebay iyo goobaha lagu duubay oo soo jiidasho badan leh.
Muxuu Ku Liitaa Filimka Mr. Majnu:
Dareen qiiro badan malahan filimkan oo daawadayaasha saameyn xoogan ku yeelan lahaa.
Qaabka ay sheekada ku socoto oo la fahmi karo iyo halka saac dambe oo xoogaa caajis ka muuqdo.
Qiimeynta Sheekada Filimka Mr. Majnu: 3/5 (Sedex xidig)
Gunaanad: Director Venky Atluri wuxuu la yimid fariin jaceyl iyo shactiro oo la daawan karo taasi oo aan dareen qiiro badan laheyn balse bandhiga Akhil iyo Nidhhi Agerwal oo aad u sareeyo waa hubaal in dhalinta filimkan soo dhaweyn doonto waxayna u badan tahay inuu filim guuleesto noqon doono.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Mr. Majnu ee Akhil doonayo inuu guushiisa ugu horeeyo dhanka Boxoffice-ka ku gaaro:
Waxaa Aqrisay 886